ဧပွီ ၂၈, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၉ ညနေ News Code : 1252754 Source : ABNA Link:
قالالصَّادِقِع : قَالَ: شِيعَتُنَاجُزْءٌمِنَّا،خُلِقُوامِنْفَضْلِطِينَتِنَا،يَسُوؤُهُمْمَايَسُوؤُنَا،وَيَسُرُّهُمْمَايَسُرُّنَا،فَإِذَاأَرَادَنَاأَحَدٌفَلْيَقْصِدْهُمْفَإِنَّهُمْالَّذِينَيُوصَلُمِنْهُإِلَيْنَا.
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှီအာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ချေသည်။၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့၏သန့်စင်သန့်ပြန်သည့်မြေမှဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခ၊သောကဖြစ်စေသောအရာသည်၎င်းတို့အဖို့လည်းဒုက္ခ၊သောကကိုဖြစ်စေလေ သည်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုပီတိ၊၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေသည့်စကားသည်လည်း၎င်းတို့အဖို့ပီတိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိုဖြစ်စေပေသည်။အကြင်မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်နီးစပ် နီးကပ်ရင်းနှီးလိုလျှင် ၎င်းတို့ထံချည်းကပ်ပါလေ။အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ် တို့နှင့်သာမန်မနုဿ၊ပုထုဇဉ်လူသားများအကြားအမှီခံ၊ဆက်နွယ်ပေးသူများ ဖြစ် ချေသည်။
ညွှန်း - အမာလီရှိက်ခ်သူစီ(ရ.ဟ)ကျမ်းအတွဲ (၁)
အထက်ဖော်ပြပါဟဒီးစ်တော်အားလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်အထင်အရှားသိမြင် ရမည့်အချက်မှာအဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ)၏နှစ်သက်သည့်အရာများသည်၎င်းတို့၏စစ်မှန်သောရှီအာများ၏နှစ်သက်ပေမည်။ထို့အတူမုန်းတီးရွံရှာသော အရာများ သည် လည်းရှီအာအစစ်အမှန်များမုန်းတီးရွံရှာလေ၏။
ဤအတွက်ကြောင့်အလ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ)မည်သည့်အရာများကိုနှစ်သက် မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားကြောင်း၊မည်သည့်ကိစ္စများကိုမုန်းတီး၊မနှစ်မြို့ ကြောင်း အသေအချာ သိရှိထားဖို့၊လေ့လာလိုက်စား၊ကျင့်သုံးနာယူရန်ရှီအာစစ်ရှီအာမှန်ဖြစ်လိုသူတိုင်း၏သမိုင်းပေးတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့်အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) သည်အလ္လာဟ်ဟိုအ ရှင် မြတ် သခင်၏လမ်းစဉ်တွင်လှူဒါန်းပေးကမ်းခြင်းကိုနှစ်သက်မြတ်နိုး၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုရှီအာဟုလည်းကြွေးကြော်၏။သို့သော်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်လမ်းစဉ်တွင်လှူဒါန်းဖို့စိတ်မပါဆိုလျှင်….? စဉ်းစားစရာ ....?
၎င်းတို့သည်နမာဇ်၊ရိုဇာ၊ခွမ်းစ်စသည်ဖြင့်ကိုနှစ်သက်၏။လက်တွေ့ လုပ် ဆောင် ခဲ့ကြလေ၏။ကျွန်တော်တို့ကမူ…...!!!???.
၎င်းတို့သည်မာန်မာန၊အတင်းအဖျင်း၊ကောက်ကျစ်ခြင်း ၊စကားအပေးအယူပြုမှုခြင်း စသည့်မကောင်းမှုဒုစရိုက်များကိုရွံမုန်း၍လုံးဝရှောင်ကြဉ်ကြလေ၏။ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြဖို့ပင်မလို ၊ လက်ရှိ အခြေအနေအမှန် ကို အများစု အသိပင် ......!!!???
(၁) ရှီအာများသည်အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လေရာရှီအာ များကိုပုတ်ခတ်စွပ်စွဲမတရားပြောသူများ၊ယုတ်စွကာဖေရ်ဟုပြောသူများ သည်ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) ၏အနွယ်တော်မွန်များ (အ.စ) ကိုပြောဆိုခြင်း မည်သွား လေ၏။
(၂) ရှီအာများသည်ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့်အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ)တို့၏အကြိုက်ကိုသာကြိုက်ပြီးး၊မနှစ်မြို့ လည်းမနှစ်မြို့ ကြ ချေ။အေးအတူ ပူ အမျှဝမ်းသာအတူဝမ်းနည်းမလွဲပင်တည်း။
(၃) အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံရောက်ဖို့နီးစပ်ဖို့ချည်းကပ်နိုင်ရန်တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)၏၀ဇီလာလိုလေ၏။ကိုယ်တော်ထံရောက်နိုင်ရန်အဟ်လေ့ ဘိုက်(သ)(အ.စ) ၏၀ဇီလာလိုပြန်လေသည်။အနွယ်တော်မွန်များ ထံရောက် ရန်တစ်ခါရှီအာအစစ်အမှန်တို့လိုပြန်ကြောင်းထင်ရှားနေလေ၏။ဤအတွက် ကြောင့်အဆင့် မကျော်နိုင်ကြောင်းဆိုသည့်အချက်ကိုမေ့မရချေ။
၀မ်းနည်းစရာ ၊ ဤမျှအဆင့်သရ်ဂျာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သည့်ရှီအာအားယနေ့မိမိ ကိုယ်မိမိမွတ်စလင်မ်ဟုခံယူထားသူအရေခြုံအတုများအနေဖြင့်သူခိုးကလူပြန်ဟစ်ဆိုသည့်အခြေအနေသို့ရောက်နေလုပ်နေကြလေသည်။
قالعلیع : إِنَّاللَّهَسُبْحَانَهُوَتَعَالَىاطَّلَعَإِلَىالْأَرْضِفَاخْتَارَنَاوَاخْتَارَلَنَاشِيعَةًيَنْصُرُونَنَاوَيَفْرَحُونَلِفَرَحِنَاوَيَحْزَنُونَلِحُزْنِنَاوَيَبْذُلُونَأَنْفُسَهُمْوَأَمْوَالَهُمْفِينَافَأُولَئِكَمِنَّاوَإِلَيْنَاوَهُمْمَعَنَافِي‏ الْجِنَانِ‏.
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်အနေဖြင့်မြေပထ၀ီပေါ်သို့ဂရုပြုတော်မူ၍ကျွန်ုပ် တို့အားရွေးချယ်မြောက်စားလေ၏၊ ပြီးနောက် ကျွန်ုပ် တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီ ဖေးမသည့်အုပ်စုရှီအာ၊ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းသာလျှင်လိုက် ၍၀မ်းသာသည့်အုပ်စု(ရှီအာ)၀မ်း နည်းကြေကွဲလျှင်လိုက်၍၀မ်းနည်းကြေကွဲသည့်အုပ်စု(ရှီအာ) အားဖန်ဆင်း ချီးမြှင့် တော်မူခဲ့လေသည်။ထို(ရှီအာများသည်)မိမိတို့၏အသက်ဇီဝိန်၊ပစ္စည်းဥစ္စာအားကျွန်ုပ်တို့အတွက်စတေးကြလေသည်။ဤ(ရှီအာ)များသည်ကျွန်ုပ်တို့မှဖြစ်ချေသည်။၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖက်မျက်နှာမူထားလေသည်။ဂရုစိုက်လေသည်။ ပြီးနောက်ဂျန္နတ်၊အမတသုခဘုံ၌လည်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူစံမြန်းကြပေလိမ့်မည်။
ညွန်း - ဂိုးရရိုဟေကမ်း(မ)ကျမ်း
(၁) ရှီအာအစစ်အမှန်ဖြစ်လိုလျှင်မိမိတို့၏၀မ်းသာမှု၊၀မ်းနည်းမှုကိုအဟ်လေ့ ဘိုက်(သ)နှင့်တူမတူစိစစ်ရပေမည်။
(၂)ကိုယ်တော်(ဆွ)နှင့်ကိုယ်တော်(ဆွ)၏အနွယ်တော်မွန်၊အိမ်တော်သူအိမ်တော်သား (အ.စ) များအတွက်အသက်ဥစ္စာပစ္စည်းအချိန်စသည်တို့ကိုရှီအာစစ်လျှင်စတေးရဲ ပေမည်။မိမိကိုယ်မိမိရှီအာဟုကြေငြာပြီး အမှန်တကယ်ရိုးသားပြီးအတိ အကျ၊ပေးသည့်သူတော်စင်၊သူတော်ကောင်းလူကြီးလူကောင်းတို့ အနေ ဖြင့်မဂျလစ်ပြုရန်စာအုပ်ထုတ်ဝေရန်၊မဟော်ရမ်ထမင်းကျွေးရန်အလှူငွေ တောင်းခံချိန်၌လက်တွန့်သူများ၊မသိချင်ယောင်ဆောင်နေသူများသတိပြ၊ုပြု ပြင်သင့်ပေသည်။အင်ရှာအလ္လာလ် - မြတ်အလ္လာဟ် ပြုပြင် နိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူပါစေ။
(၃) အမြဲ တစေကိုယ်တော်နှင့်အနွယ်တော်မွန်တို့အပေါ် ဂရုစိုက် စိတ်ဝင်စားဖို့ လိုပေသည်။
(၄)ရှီအာသည်ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) နှင့်အလ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) နှင့်အတူဂျန္နတ် တွင်စံမြန်းရမည်ဟုသာဝကတော်များတွင်အမှန်ကန်ဆုံးပညာအရှိဆုံး၊အကြီးကျယ်၊အမြတ်ဆုံးဖြစ် သည့်မောင်လာ အလီ (အ.စ)၏ဟဒီးစ်တော် မှန် ရှိလျှက်ရှီအာ(၇) ဦးကိုသတ်လျှင်ဂျန္နတ်ရောက်မည်ဆိုသည့်စလ်ဖီ၊၀ဟာဘီ တို့၏ဖသ်ဝါမှာရယ် စရာ၊ သနားစရာပင်တည်း။
قَالَالصَّادِقُع‏ : شِيعَتُنَاأَهْلُالْوَرَعِوَالِاجْتِهَادِوَأَهْلُالْوَفَاءِوَالْأَمَانَةِوَأَهْلُالزُّهْدِوَالْعِبَادَةِأَصْحَابُإِحْدَىوَخَمْسِينَرَكْعَةًفِيالْيَوْمِوَاللَّيْلَةِالْقَائِمُونَبِاللَّيْلِالصَّائِمُونَبِالنَّهَارِيُزَكُّونَأَمْوَالَهُمْوَيَحُجُّونَالْبَيْتَوَيَجْتَنِبُونَكُلَّمُحَرَّمٍ.
بحارالانوارجلد 65 ص 167 (ط .بیروت )
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှီအာဆိုသည်မှာသီလသမာဓိဆောက်တည်သူ၊ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သူ၊သစ္စာ၊ကတိတည်သူ၊အလွဲသုံးစားမပြုသူ၊လောက မမက်မောသူနှင့်အေဗာဒသ်ပြုသူဖြစ်ချေသည်။နေ့နှင့်ညတွင်(၅၁) ရကတ်နမာဇ်ဖတ် လေသည်။တစ်ညလုံး(အေဗာဒသ်ပြု၍နိုးထနေပေသည်။နေ့၌ရိုဇာ ဥပုသ် သီလ ဆောက်တည်လေသည်။မိမိ၏ဥစ္စာပစ္စည်းမှဇကာသ်ပေးဆောင်ပေသည်။မြတ် အလ္လာဟ်အိမ်တော်သို့သွားရောက် ပြီး ဟဂ်ျပြုလေသည်။ဟရမ်လုပ်ရပ်မှန်သမျှမှရှောင်ကြဉ် ပြီးနေထိုင်လေ၏။
ညွှန်း- ဘေဟာ(ရ)ရွလ်အန်န၀ါရ်ကျမ်းအတွဲ၆၅၊စာမျက်နှာ၁၆၇၊ ပုံနှိပ် - ဘေရွတ်မြို့
(၂) ၅၁ရကတ်ဆိုသည်မှာနမာဇ်(၅)ကြိမ်နှင့်နာဖေလာများအပါအ၀င်နမာဇ်စေရှဗ် (ခ) နမာဇ်စေသဟ်ဂျွဒ်(၁၁) ရကတ်ကိုပေါင်း၍ဆိုလိုထားပေသည်။(၅၁) ရကတ်ကိုမဆိုထားပဲနေ့စဉ်နမာဇ်(၅) ကြိမ် မမြဲ သူများမိမိကိုယ်ရှီအာဟုထင်နေကြွေးကျော်နေသည်မှာရှက်စရာပင်တည်း။
(၃) ကျွန်တော်တို့ တတွေ တစ်ညလုံးအေဗာဒသ်အတွက်ဆို နိုးမနေပဲ၊ညတစ်ဝက် (သို့မဟုတ်) ညနက်သည်အထိရုပ်ရှင်ကြည့်နေ ၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေစ သည်ဖြင့်အလုပ်များ လုပ်နေပြီး ၊ကိုယ့်ကိုရှီအာဟုထင်နေသည်မှာလည်းတွေးစရာရှက်စရာပင်။
(၄)ရှီအာမှန်လျှင်ဇကာသ်လည်းပေးဆောင်ရမည်ဟုဟဒီးစ်တော်ကညွှန်းထား ရာတရားသည့်နည်းဖြင့်ငွေချမ်းသာဖို့လိုပြန်ပေသည်။ငွေအသပြာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိလျှင်မည်သို့ဇကာသ်ပေးကြမည် နည်း?တရား သည့်နည်းဖြင့် ရှာမှ သာလျှင်ဟဒီးသ်တော်နောက်တစ်ချက်အဆိုဖြစ်သည့်ဟရမ်လုပ်ရပ်မှန် သမျှ မှရှောင် ကြဉ်ခြင်းနှင့်ညီပေမည်။
قَالَالصّادقع : امْتَحِنُواشِيعَتَنَاعِنْدَثَلَاثٍعِنْدَمَوَاقِيتِالصَّلَاةِكَيْفَمُحَافَظَتُهُمْعَلَيْهَاوَعِنْدَأَسْرَارِهِمْكَيْفَحِفْظُهُمْلَهَاعِنْدَعَدُوِّنَاوَإِلَىأَمْوَالِهِمْكَيْفَمُوَاسَاتُهُمْلِإِخْوَانِهِمْفِيهَا.
الخصالج 1 ص 103
ညွန်း - အလ်ခေဆွာလ်ကျမ်း အတွဲ ၁ စာမျက်နှာ ၁၀၃
(၂)သာသနာ့ညီနောင်များကိုကူညီဖးမရန်ညွှန်းထားလေ၏။ဒုက္ခပေး၊ကောက် ကျစ်ရန်မဆိုထားချေ။ဤအတွက်မိမိတို့၏သာသနာ့ညီနောင်တို့၏အလုပ် ကိစ္စမှန်သမျှ အတွက်မိမိတို့၏ ပစ္စည်းဥစ္စာ အသပြာစသည်ဖြင့်မကူညီနိုင် လျှင်လည်းအနည်းဆုံးမနှောက်ယှက်သင့်ချေ။
عَنِالصَّادِقِع : فِيوَصِيَّتِهِلِعَبْدِاللَّهِبْنِجُنْدَبٍيَاابْنَجُنْدَبٍإِنَّمَاشِيعَتُنَايُعْرَفُونَبِخِصَالٍشَتَّىبِالسَّخَاءِوَبِالْبَذْلِلِلْإِخْوَانِوَبِأَنْيُصَلُّواالْخَمْسِينَلَيْلًاوَنَهَاراًالْخَبَرَ.
مستدرکالوسائلومستنبطالمسائلج3ص 52
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှီအာအားအချို့ကောင်းမြတ်သည့်လက္ခဏာများနှင့် သိရှိနိုင်ပေ သည်။
ညွှန်း-မွစ်သဒရကိုလ်ဝစာ အေလ် ဝါ မွစ်သန်ဗေသွလ်မစာအေလ်ကျမ်း အတွဲ၃ ၊စာမျက်နှာ ၅၂
(၂)မိုမင်များကိုအကျိုးယုတ်စေသည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေသူများ အထူးသတိပြုသင့်ပေသည်။အထူးသဖြင့်မိမိတို့ခုံနေရာစသည်ဖြင့်ပိုင်ဆိုင် ရေးအတွက်မိုမင်များ၏စုစည်းမှု၊စည်းရုံးမှုကိုပင်အသိအမှန်မပြုတော့ပဲထင်ရာဆိုင်းသူများပြုပြင်ရန်မီးမောင်းထိုးပြနေလေသည်။
عنالسندیبنمحمدرفعهقالع : تَبِعَقَوْمٌأَمِيرَالْمُؤْمِنِينَفَالْتَفَتَإِلَيْهِمْفَقَالَمَنْأَنْتُمْقَالُواشِيعَتُكَ‏ يَاأَمِيرَالْمُؤْمِنِينَقَالَمَالِيلَاأَرَىعَلَيْكُمْسِيمَاءَالشِّيعَةِفَقَالُواوَمَاسِيمَاءُالشِّيعَةِقَالَصُفْرُالْوُجُوهِمِنَالسَّهَرِخُمْصُالْبُطُونِمِنَالصِّيَامِذُبُلُالشِّفَاهِمِنَالدُّعَاءِعَلَيْهِمْغَبَرَةُالْخَاشِعِينَ.
တနေ့၌အမီးရွလ်မိုမေနီမောင်လာအလီ(အ.စ) သည်(တစ်နေရာရာသို့)ကြွမြန်းတော်မူနေ လေ ၏။အချို့ ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ကိုယ်တော်၏နောက်သို့လိုက်လာကြလေ၏။ကိုယ်တော် အနေဖြင့် ၎င်းတို့ မျက်နှာပြု၍မေးတော်မူလေ၏။အသင်တို့ဘယ်သူတွေလဲ။၎င်းတို့မှအဖြေပေးလျှောက်ထားလေ၏။အိုအမီးရွလ်မိုမေနီသခင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တော်၏ရှီအာတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား၊အေမာမ်ဆက်ပြီးမိန့်လေ၏။အဘယ် အတွက်ကြောင့်အသင်တို့မောင်ရင်တို့မျက်နှာတွေမှာရှီအာ၏အမှတ်အသားများကိုမတွေ့ရပါသနည်း။၎င်းတို့အနေဖြင့်ဆက်၍မေးလျှောက်ပြန်၏။ရှီအာများ၏ အမှတ် အသားများသည် အဘယ် အရာများဖြစ် ပါသနည်း? အေမာမ်(အ.စ) အနေဖြင့်အဖြေပေး တော်မူလေ၏။
ညလုံးပေါက်မအိပ်စက်သည့်အတွက်၎င်းတို့၏မျက်နှာအရောင်ဟာအ၀ါရောင်ဖြစ်နေလေ၏။ ရိုဇာ၊ဥပုသ်သီလဆောက်တည်မှုများကိုပြုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းတို့၏၀မ်းဗိုက်များသည်ကျောနှင့်တပြေးတည်းဖြစ်နေလေ၏။ဒိုအာတောင်းဆိုမှု ပြုသည့်အတွက်၎င်းတို့၏နှုတ်ခမ်းများသည်ခြောက်သွေ့နေလေ၏။ထိုပြင်၎င်းတို့ အပေါ်(မြတ်အလ္လာဟ်) အားကြောက်ရွံ့၊ကျိုးနွံ့မှုအချင်းလက္ခဏာဖိစီးနေပေသည်။
(၂)အေဗာဒသ်မပြုဘဲညလုံးပေါက်ရုပ်ရှင်ထိုင်ကြည့်၍လက်ဖက်ရည် ဆိုင် ထိုင်၍ လျှောက်လည်နေ၍မျက်နှာအရောင်ဝါနေခြင်း၊ရိုဇာအမြောက် အမြား ထားသော်လည်းဗိုက်နှင့်ကျောတပြေးတည်း မဖြစ်နေခြင်း(မပိန်ခြင်း)ဒိုအာ ကြောင့်မဟုတ်ဘဲအပူရှိန်ကြောင့်နှုတ်ခမ်းခြောက် သွေ့နေခြင်းတို့သည်ဤ ဟဒီးစ်တော်၏ဆိုလိုချက်များမဟုတ်ချေ။အထူးသတိပြုသင့်ပေသည်။
قالالصادقع‏ : الشِّيعَةُثَلَاثٌ‏ مُحِبٌّوَادٌّفَهُوَمِنَّاوَمُتَزَيِّنٌبِنَاوَنَحْنُزَيْنٌلِمَنْتَزَيَّنَبِنَاوَمُسْتَأْكِلٌبِنَاالنَّاسَوَمَنِاسْتَأْكَلَبِنَاافْتَقَرَ.
خصالجلد 1 ص 103
ပထမအမျိုးအစား - ကျွန်ုပ်တို့အားအချစ်မေတ္တာထားနှစ်သက်မြတ်နိုး တန်ဖိုး ထား လေ၏။ဤအုပ်စုအမျိုးအစားသည်ကျွန်ုပ်မှဖြစ်လေသည်။
ဒုတိယအမျိုးအစား -ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်နာမကိုယူ၍မိမိကိုယ်ကိုသိက္ခာပေးသူ၊ပြင်ဆင်သူ၊ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဤအုပ်စုကြောင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိလေ၏။(အမည်မဖျက် လေ၏)
တတိယအမျိုးအစား - ကျွန်ုပ်တို့ကိုစားပေါက်အဖြစ်အလွဲ သုံးစားပြုသည့်အုပ်စု ဖြစ်ပေသည်။အကြင်မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုပြပြီးဝမ်းရေးပြုမည်ဆိုလျှင်ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်ခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။
ညွှန်း - အလ်ခေဆွာလ်ကျမ်း အတွဲ ၁ စာမျက်နှာ ၁၀၃
(၂)ကိုယ်တော်(ဆွ)နှင့်အတ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ဂုဏ်သိက္ခာမညှိုးနွမ်းစေဖို့၊ပြထား မမိဖို့မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းထင်ရှားနေပေသည်။
قالالباقرع : شِيعَتُنَاثَلَاثَةُأَصْنَافٍصِنْفٌيَأْكُلُونَالنَّاسَبِنَاوَصِنْفٌكَالزُّجَاجِيَتَهَشَّمُوَصِنْفٌكَالذَّهَبِالْأَحْمَرِكُلَّمَاأُدْخِلَالنَّارَازْدَادَجَوْدَةً.
ပထမအမျိုးအစား - ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြောင်းပြပြီး လူထုထံမှစားသောက်ကြလေသည်။
ဒုတိယအမျိုးအစား - မှန်ကဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပနေသူများဖြစ်ကြလေ၏။အတွင်း၌ ရှိသည့်အတိုင်းအပြင်၌လည်းမြင်နေလေ၏။(ဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့ကြလေ၏။)
တတိယအမျိုးအစား - ရွှေကဲ့သို့ပင်တည်း၊မည်မျှပင်မီးပေးလေလေ၊ပိုပြီး အရောင်ထွက်လာလေလေ ၊၊ စစ်လာလေလေ၊အရည်အသွေးပြည့်ဝလာလေလေပင်ဖြစ်ပေသည်။
قَالَالصَّادِقُع‏ : لَيْسَمِنْشِيعَتِنَامَنْ‏ أَنْكَرَأَرْبَعَةَأَشْيَاءَالْمِعْرَاجَوَالْمُسَاءَلَةَفِيالْقَبْرِوَخَلْقَالْجَنَّةِوَالنَّارِوَالشَّفَاعَةَ.
ညွှန်း - မီးဇာန်းနိုဟေက်မသ်(အ)ကျမ်းအတွဲ၆
قَالَالصّادقع : مَاكَانَفِيشِيعَتِنَافَلَايَكُونُفِيهِمْثَلَاثَةُأَشْيَاءَلَايَكُونُفِيهِمْمَنْيَسْأَلُبِكَفِّهِوَلَايَكُونُفِيهِمْبَخِيلٌوَلَايَكُونُفِيهِمْمَنْيُؤْتَىفِيدُبُرِهِ.
خصالجلد 1 ص 131
ညွန်း - အလ်ခေဆွာလ်ကျမ်း အတွဲ ၁ စာမျက်နှာ ၁၃၁
(၁) ရှီအာအဖြစ်လုပ်လိုသူတိုင်းအထူးသတိပြုစရာ(သုံးချက်) ပင်တည်း။
(၂) တောင်းရမ်းခြင်းဆိုသည်မှာခွက်ကိုင်ပြီးတောင်းရမ်းမှတောင်းရမ်းသည် မဟုတ်ပါ ၊အလုပ်မလုပ်ဘဲမကြိုးစားဘဲ၊အပင်ပန်းမခံဘဲသူတစ်ပါးဆီမှငွေကိုအခမဲ့လိုခြင်းသူများ လည်းတောင်းရမ်းခြင်းဆို သည့်စက်ကွင်းမှ မလွတ် နိုင်ကြောင်းသတိချပ်သင့်ပေသည်။
(၃) လိင်တူခြင်းဆက်ဆံမှုသည်ရွံ့ စရာအကောင်းတကာ အကောင်းဆုံးနှင့် ခသာနတ်ပြုခြင်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပေသည်။
قالالأمامالباقرع : لبعضاصحابهلماَلَكَثِيرَةٌالشیعهفَقَالَهَلْ‏ يَعْطِفُ‏ الْغَنِيُّعَلَىالْفَقِيرِوَيَتَجَاوَزُالْمُحْسِنُعَنِالْمُسِي‏ءِوَيَتَوَاسَوْنَفَقُلْتُلَافَقَالَلَيْسَهَؤُلَاءِشِيعَةًالشِّيعَةُمَنْيَفْعَلُهَذَا.
ဘာလဲကောင်းမှုကုသိုလ်သုစရိုက်ပြုလုပ်ကြသည့်(ရှီအာများ) အနေဖြင့်ကောင်းမှု ၏ အဖြေအားမကောင်းမှုဒုစရိုက်ဖြင့်ပေးသူများကိုခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါသလော?
ထိုအချိန်အေမာမ်(အ.စ) မိန့်တော်မူလေ၏။၎င်းတို့သည်ရှီအာမဟုတ်ကြပေ။ရှီအာဆိုသည်မှာ(အထက်) ဖော်ပြပါအတိုင်းပြုသူများဖြစ်ကြလေသည်။
ညွှန်း- ဘေဟာ (ရ) ရွလ်အန်န၀ါကျမ်းအတွဲ၇၄
(၁) ငွေရေးကြေးရေးဥစ္စာပစ္စည်းကြွယ်ဝပြီးဆင်းရဲသားများကိုမထောက်ပံ့လျှင်ရှီအာအစစ်မဖြစ်နိုင်ချေ။ငွေရေး၊ကြေးရေးချမ်းသာရာ၌လည်းတရားသည့်နည်း၊သမာအာဇီဝကျသည့် လမ်းဖြင့်ချမ်းသာအဆင်ပြေသူဖြစ်ရပေမည်။(သို့မဟုတ်)ပါကအိတ်ပေါက်နှင့်ဖားကောက်ဖြစ်နေပေမည်။မပြောကောင်း၊မဆိုကောင်းရှီအာနာမည်ပါပျက်နေရပေမည်။
(၂)အငြိုးအတေးကြီးသူများထားသူများကလဲ့စားချေတတ်သူများ အထူးသတိပြု သင့်ပေသည်။မတော်တဆကိုယ်ကျေးဇူးပြုခဲ့သူများကျေးဇူးကန်းခဲ့လျှင် လည်းမြတ်အလ္လာဟ်ဖို့ဟုနီယသ်ဖြင့်ခွင့်လွတ်ပေးရပေမည်။ဤလုပ်သည် ပြောလျှင်ရေးလျှင်အလွန်လွယ်ကူသောလည်းလက်တွေ့အတွက်ခက်ပေ သည်။သို့သော်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပေ။
(၃)ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိဖို့လိုလေသည်။ငါအိမ်ပဲလာရမည်။သူ့အိမ်ကိုမသွားရ၊ ငါနှင့်ပဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမည်။သူနှင့်မပေါင်းသင်းမဆက်ဆံရ။ငါအတွက်ငါအဖွဲ့အတွက်လှူရ၊ဒါန်းရ၊ကူရမည်။အခြားအဖွဲ့အခြားသူအတွက်ယုတ်စွရှီအာအကျိုးပြုအလုပ်ပင်လုပ်နေပါစေ။မလှူဒါန်းရ၊မကူရ။ငါတို့အတွက် ဆိုလျှင်နိုင်ငံခြား၏မတည်ငွေဖြင့်စာအုပ်ထုတ်နိုင်သည်။အဆောက်အဦး ၀ယ်နိုင်သည်။အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုအရာများဖန်တီးနိုင်လေသည်။သူများအတွက်ဆိုNo ၊ No စသည်စိတ်ပုပ်၊စိတ်ယုတ်၊စိတ်ရိုင်းထားပြီး ရှီအာဟုကြေငြာနေသူများအထူးသတိပြုအရှက် ရပြီး သောင်ဗာပြုကာပြုပြင်သင့် ပေပြီး။
ဤကဲ့သို့အထက်ဖော်ပြပါစိတ်ပုပ်၊စိတ်ယုတ်။စိတ်ရိုင်းထားသည့် အမည်ခံ ရှီအာများကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိသည့်ရှီအာများသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရော၊သူတို့ အပေါင်းအသင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းရော၊ယုတ်စွအမြင်မှန်သည့်ဂျမာအတ်သူ၊သားများမှ သိနေလေ၏။အထက်၌သာဓကအဖြင့်အနည်းငယ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။စာရူသူ၊ချစ်ပရိတ်သတ်အနေဖြင့်ဤထက်ပို၍အတွေ့အကြုံများပေမည်။
قالالرِّضَاعقَالَ: شِيعَتُنَاالْمُسَلِّمُونَ‏ لِأَمْرِنَاالْآخِذُونَبِقَوْلِنَاالْمُخَالِفُونَلِأَعْدَائِنَافَمَنْلَمْيَكُنْكَذَلِكَفَلَيْسَمِنَّا.
(၁) ရိုးပြီး ၊ရှင်းနေလေ၏။
(၂) ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့်အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ၏အဆိုအမိန့်များသည်ဘာလဲဆိုတာလဲမသိ၊သိအောင်လည်းမကြိုး စား၊ သိအောင်ပြုပေးနေသူများ ကိုလည်းအားမပေး သည့်ရှီအာဆို သည့်ဆိုင်းဘုတ် ကိုင်ထားသူများအတွက် ရင်လေးစရာပင်။
(၃) ဟဒီးစ်ပါအချက်များကိုလက်တွေ့မလိုက်နာသူသည်သာမန်၊အပြစ်ရှိလူသား များ၏အမြင်၌ရှီအာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လေ၏။သို့သော်ပြစ်မဲ့မအ်စူးမီး(မ်) ၏အမြင်၌မဖြစ်နိုင်ချေ။
قَالَالصّادقع : وَاللَّهِمَاشِيعَةُعَلِيٍّعإِلَّامَنْعَفَّبَطْنُهُوَفَرْجُهُوَعَمِلَلِخَالِقِهِوَرَجَاثَوَابَهُوَخَافَعِقَابَهُ.
အလ္လာဟ်ဟိုအသျှင်မြတ်၏ကစမ်၊ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်အလီ(အ.စ) ၏ရှီအာဖြစ်ပေ သည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိ၏၀မ်းနှင့်လိုအင်ဆန္ဒကို(ဟရမ်နည်းလမ်းများနှင့် ဖြည့်ခြင်း မှ)ရှောင်ကြဉ်လေ၏။မြတ်အလ္လာဟ်၏နှစ်သက် နှစ်မြို့ ကျနပ်မှုရရန်အလိုငှာအလုပ် များကိုလုပ်ဆောင်လေ၏။မြတ်အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်မည့်အကျိုးဆုလာဒ်စ၀ါးဗ်ကိုမျှော် လင့်ထားပြီးမြတ်အလ္လာဟ်၏အဇားဗ် ပြစ်ဒဏ်ငရဲပေးခြင်းခံရမည်ကိုလည်း ကြောက်လေ၏။
قَالَالصّادقع : إِنَ‏ شِيعَةَعَلِيٍ‏ ع‏ كَانُواخُمْصَ‏ الْبُطُونِذُبُلَالشِّفَاهِأَهْلَرَأْفَةٍوَعِلْمٍوَحِلْمٍيُعْرَفُونَبِالرَّهْبَانِيَّةِفَأَعِينُواعَلَىمَاأَنْتُمْعَلَيْهِبِالْوَرَعِوَالِاجْتِهَادِ.
بحارانوارجلد 65 ص 188
ဧကန်မုချအလီ(အ.စ)၏ရှီအာ၏၀မ်းဗိုက်သည်ပိန်လေ၏။နှုတ်သည်ခြောက်သွေ့ နေလေ၏။ထိုသူများသည်သနားကြင်နာညာတာပြီးမေတ္တာရှိသူများဖြစ်လေ၏။ပညာတတ်သူများနှင့်ကျိုးနွံသူများဖြစ်လေသည်။၎င်းတို့၏လောကမမက်မောမှု ကြောင့်သီးသန့်၎င်းတို့ကိုသိရပေသည်။ဤအတွက်ကြောင့်(ဂိုနာအပြစ်ဒုစရိုက် များမှ)သန့်စင်ပြီးလွန်မြောက်ရန်ကောင်းမှုသုစရိုက်များပြုနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများ ထားရှိရပေမည်။ဤနည်းဖြင့်မိမိတို့၏ယုံကြည်မှုများ(ဝေလာယသ်သေအလ်လေ့ ဘိုက်(သ)(အ.စ)) အားကူညီဖေးမရပေမည်။
ညွှန်း - ဘေဟာ (ရ) ရွလ်အန်န၀ါရ်ကျမ်းအတွဲ (၆၅) စာမျက်နှာ၁၈၈
(၁) စားတိုင်းလည်းမ၀သူများ၊(ဗိုက်မပူသူများ)၊မစားလည်းဝနေသူများ (ဗိုက်ပူနေသူများ)ဤဟဒီးစ်၌အကျုံးဝင်မ၀င်နောက်ဗိုက်မပူပဲ၊ပိန်နေရမည်ဆိုသည့်သဘောတရား အဖြစ်အမှန်၊နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့နေရမည့်ဆိုသည် ဆိုလိုချက်ကိုဟဒီးစ်ပါရဂူပညာရှင်ဆရာတော်များထံတိုက်ရိုက်(သို့မဟုတ်)တဆင့်ဖြစ်မေးမြန်းပြီး သိရန် ကြိုး စားရပေမည်။
(၂)ရှီအာစစ်ရှီအာမှန်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ထားရမည့် အရည်အသွေးနှင့် ဆောင် ရန်ရှောင်ရန်ကိုလည်းမြင်နေရပေပြီး။
قالالأمامالعسکریع : شِيعَةُعَلِيٍّهُمُالَّذِينَلَایبالونفیسبیلاللَّهِأَوْقَعَالْمَوْتُعلیهمأَوْوَقَعُواعلیالْمَوْتِوَشیعةعلیهُمْالذینیوئوثروناخوانهمعلیأَنْفُسِهِمْولوکانبِهِمْخَصاصَةٌوَهْمُالَّذِينَلَايَرَاهُمْاللَّهُحَيْثُنَهَاهُمْ،وَلَايفقدهمحَيْثُأَمْرَهُمْ؛وَشِيعَةُعَلِيِّهُمُالَّذِينَيَقْتَدُونَبِعَلِيٍّ«ع»فِيإِكْرَامِإِخْوَانِهِمُالْمُؤْمِنِينَ
အလီ(အ.စ) ၏ရှီအာများသည်အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်၏လမ်းစဉ်၌သေခြင်းတရားသည်သူတို့နောက်လိုက်လိုက်(သို့မဟုတ်) ၎င်းတုို့မှသေခြင်းတရားနောက်သို့လိုက်ရလိုက်ရဂရုမပြုချေ။အလီ(အ.စ) ၏ရှီအာဆိုသည်မှာမိမိလိုအပ်နေသည့်အခြေအနေမှာတောင်မိမိ ညီအစ်ကို၏လိုအပ်မှုကိုအလေးပေးလေ၏။၎င်းတို့ကိုမြတ်အလ္လာဟ်တားမြစ် ပိတ်ပင်ထားသည့် နေရာများတွင်တွေ့ရမည်မဟုတ်ချေ။အမိန့်ပေးထားသည့်နေရာ များတွင်လည်းမပျောက်ကွယ်ဘဲရှိနေကြလေသည်။အလီ(အ.စ)၏ရှီအာဆိုသည်မှာမိမိသာသနာ့ညီနောင်မိုမေနီများကိုရိုသေလေးစားဂါရ၀ပြုရာတွင်အလီ၏လမ်းစဉ်ကျင့် စဉ်အတိုင်းကျင့်သုံးလိုက်နာလေသည်။
(၁)မြတ်အလ္လာဟ်၏လမ်းစဉ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင် နေရပြီး သေရမည်ကိုရှီအာမှန်ရှီအာဖြစ်လျှင်မကြောက်ချေ။သေခြင်းတရားသည်တနေ့မလွဲဧကန်ရောက်လာမည်ဖြစ်ပေသည်။သိက္ခာရှိရှိသေရခြင်းကိုပိုနှစ်သက်လေ သည်။
(၂)မိမိလိုအင်ဆန္ဒထက်အခြားသာသနာညီနောင်များ၏လိုအင်ဆန္ဒကို အလေး မပေးသည့်အပြင်အမြတ်လိုက်ထုတ်နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသတိပြုသင့် ပေသည်။
(၄) မိမိထက်အသက်၊၀ါ၊ပညာကြီးသူကိုမဆိုထား နှင့် မိုမင်ကိုတောင်အရိုအသေပြုရမည်ဟုဟဒီးစ်တော်မှတင်ပြထားရာမိမိကိုယ်ရှီအာအဖြစ် ခံယူထားသူများသတိချပ်သင့်လေသည်။
قالالباقرع : يَاأَبَاالْمِقْدَامِإِنَّمَاشِيعَةُعَلِيٍ‏ عالشَّاحِبُونَالنَّاحِلُونَالذَّابِلُونَذَابِلَةٌشِفَاهُهُمْخَمِيصَةٌبُطُونُهُمْمُتَغَيِّرَةٌأَلْوَانُهُمْمُصْفَرَّةٌوُجُوهُهُمْإِذَاجَنَّهُمُاللَّيْلُاتَّخَذُواالْأَرْضَفِرَاشاًوَاسْتَقْبَلُواالْأَرْضَبِجِبَاهِهِمْكَثِيرٌسُجُودُهُمْكَثِيرَةٌدُمُوعُهُمْكَثِيرٌدُعَاؤُهُمْكَثِيرٌبُكَاؤُهُمْيَفْرَحُالنَّاسُوَهُمْيَحْزَنُونَ.
بحارالنوارجلد 65 منقولازخصالصدوقره
အိုအဗူလ်မစ်က်ဒါမ်၊ဧကန်မုချအလီ(အ.စ) ၏ရှီအာများ၏မျက်နှာသည်အ၀ါရောင်သန်းနေလေ၏။ကိုယ်ခန္ဓာသည်အားနည်းပြီး နှုတ်ခမ်းများသည်ခြောက်သွေ့နေလေ၏။ရိုဇာဥပုဒ်သီလဆောက်တည်ခြင်း များကြောင့်၎င်းတို့၏နှုတ်ခမ်းများသည်ခြောက်သွေ့နေပြီး ၊ဗိုက်သည်ပိန်နေလေ၏။အရောင်မှာအ၀ါရောင်အသားဖြစ်နေပြီး မျက်နှာတွင်(မြတ်အလ္လာဟ်) အားကြောက်စိတ်ပေါ်နေလေ ၏။ညအချိန်ရောက်လျှင်မြေပထ၀ီအားမိမိအတွက်အခင်းအဖြစ်သုံးလေ၏။မိမိ၏နဖူးပြင်အားမျက်ရည်များနှင့်စိုစွတ်နေသည့်မျက်လုံးနှစ်ခုနှင့်မျက်ရည်ပေါင်းများစွာ(ခ) အလွန်တရာငိုကြွေး မှုဖြင့်စဂ်ျဒါပြုနေလေ၏။
ညွှန်း- ဘေဟာ(ရ) ရွလ်အန်န၀ါရ်ကျမ်းအတွဲ(၆၅)ခေဆွာလေဆဒူဟ်(ရဟ)မှ
(၂) ဟဒီးစ်တော်မှတညလုံးမြတ်အလ္လာဟ်၏အေဗာဒဟ်ပြုဖို့ ဆိုထားလေသည်။ကျွန်တော်တို့တတွေဟာမိမိကိုယ်မိမိရှီအာလိုလည်း ခံယူထားသည်။ပြီးနောက်ညလုံးပေါက်တညလုံးအေဗာဒသ်ပြု မပြုကိုမဆိုနှင့် ရမ်ဇန်လမြတ်ည(၁၉)၊(၂၁)(၂၃) ရက်ညများ၊မဟော် ရမ်လမြတ်၉ရက်ညစသည်ဖြင့်အတွက်ပင်အားထုတ် ခြင်းမရှိ ကြချေ။
(၃)ကျွန်တော်တို့တတွေနမာဇ်ဝတ်ပြုမှု၊ဒိုအာတောင်းဆိုမှု၊ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ဖတ်ရွတ်မှုများတွင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိကြ ပေသည်။အခြားသူတပါးအားမေးမြန်းရန်မလိုအပ် ချေ။
ယခုလက်ရှိအီရန်နိုင်ငံ ကွမ်းမြို့ ရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားအများဆုံးတက် ရောက်ပညာသင်ယူဆည်းပူးနေသည့်အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ) တက္ကသိုလ်၏လက်ရှိကျောင်းအုပ်ကြီးဆရာတော်ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ်ဝလ်မွတ်စလေမီဆရက်ဒ်စဂျာဒ်ဟာရှေမီးရန်း(န)အနေဖြင့်မိမိကျောင်း၏ကျောင်းသားတိုင်းသည်တစ်နေ့မိနစ်၂၀ခန့်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ဖတ်ရွတ်ရန်မပြုမနေအမိန့်အဖြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊မလိုက်နာသောကျောင်းသားများအတွက်ကောလိပ်၏ရေမီးအခန်းစသည်ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ဟရမ်ဟုကြေငြာထားလေ၏။
قالرسولاللهص : ،إِنَ‏ شِيعَتَنَامَنْ‏ شَيَّعَنَا،وَاتَّبَعَآثَارَنَا،وَاقْتَدَىبِأَعْمَالِنَا.
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဟဇရတ်(သ) မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) မိန့်တော်မူလေ၏။
ညွှန်း - မီးဇန်နိုဟ်လောက်မဟ်ကျမ်းအတွဲ၆
(၂)မိမိတို့ကိုယ်မိမိငါတို့ဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) ၏စွန္နတ် တော်များ၊ကျင့်သုံးသူနောက်လိုက်စွန်နီများဟုကြွေး ကျော်နေခံယူ ထားပြီး ရှီအာများကို ပုတ်ခတ်နေသူစော်ကားနေသူ များအထူး သတိပြုပြုပြင်သင့်ပေသည်။
(၃)ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) သည်အထက်ပါဟဒီးစ်မွန်၌ရှီအာများဆိုသည့်စကားလုံးကိုသုံးပြီးမိန့်တော်မူထားလေသည်။အခြားစကားလုံးကိုမမိန့်ထားတော်မူချေ။
ဤနေရာ၌ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ပြောသည့်ရှီအာနှင့်ယနေ့ရှီအာမတူဟုစောဒကတက်မည်ဆိုလျှင်ယနေ့စွန်နီဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်မ်ဖြစ်ဖြစ်××၎င်းတို့၏ကျမ်းလာအဆိုအရစွန်နီနှင့်မွတ်စလင်ဖြစ်ပါသလား၊ကျွန်တော်အနေဖြင့်အခြားဖေရ်ကာများကိုပုတ်ခတ်စော်ကားနေခြင်းမဟုတ်ပါ။နှမ်းစေ့မျှရှိသည့်သူတစ်ပါးအားနည်းချက်အပြစ်ကိုမြင်တတ်ကြပြီး၊မြင့်မိုရ်လောက်ကြီးသည်မိမိတို့၏ဖေရ်ကာသူ၊ဖေရ်ကာသားများနှင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်၏အားနည်းချက်အပြစ်အနာအဆာများကိုမမြင်တတ်ကြ ကုန်သည့် အချို့ အစွန်းရောက်သူယုတ်မာများ ၊အကျင့်ဆိုးများ ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှီအာအားမမုန်းသူ၊လက်ခံသူစွန်နီညီနောင်များကိုအထူးတောင်းပန်ပါသည်။နားလည်ပေးမည်ဟုလည်းမျှော်လင့်ယုံကြည်မိပါသည်။
قالعلیع : شِيعَتِي‏ وَاللَّهِالْحُلَمَاءُالْعُلَمَاءُبِاللَّهِوَبِدِينِهِالْعَامِلُونَبِطَاعَتِهِوَأَمْرِهِالْمُهْتَدُونَلِحُبِّهِوَأَنْصَارُعِبَادِهِجُلَّاسُزُهَّادِهِصُفْرُالْوُجُوهِمِنَالتَّهَجُّدِعُمْشُالْعُيُونِمِنَالْبُكَاءِذُبُلُالشِّفَاهِمِنَالذِّكْرِخُمْصُالْبُطُونِمِنَالطَّوَىتُعْرَفُالرَّبَّانِيَّةُفِيوُجُوهِهِمْوَالرَّهْبَانِيَّةُفِيسَمْتِهِمْمَصَابِيحُكُلِّظُلْمَةٍوَرَيَاحِينُكُلِّقَبِيلَةٍلَايَشْنَئُونَمِنَالْمُسْلِمِينَسَلَفاًوَلَايَقِفُونَلَهُمْخَلَفاًسُرُورُهُمْمَكْنُونَةٌوَقُلُوبُهُمْمَحْزُونَةٌوَأَنْفُسُهُمْعَفِيفَةٌوَحَوَائِجُهُمْخَفِيفَةٌوَأَنْفُسُهُمْمِنْهُمْفِيعَنَاءٍوَالنَّاسُمِنْهُمْفِيرَاحَةٍفَهُمُالْكَاسَةُالْأَوْلِيَاءُوَالْخَالِصَةُالنُّجَبَاءُوَهُمُالرَّاغِبُونَالرَّوَّاعُونَقَرَاراًبِدِينِهِمْإِنْشَهِدُوالَمْيُعْرَفُواوَإِنْغَابُوالَمْيُفْتَقَدُواأُولَئِكَمِنْشِيعَتِيَ‏ الْأَطْيَبُونَوَإِخْوَانِيَالْأَكْرَمُونَالْأَتْقِيَاءُأَلَاهَاهْشَوْقاًإِلَيْهِمْ.
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ကစမ်၊ကျွန်ုပ်၏ရှီအာသည်မြတ်အလ္လာဟ်နှင့်၎င်း၏သာသနာနှင့်ပတ်သက်သည့်ပညာရှင်အာလင်မ်ဖြစ်ပေသည်။မြတ်အလ္လာဟ်၏အမိန့်ကိုနာခံပြီး၎င်း၏ဥပဒေများအပေါ်လက် တွေ့ လိုက်နာကျင့်သုံးလေသည်။မြတ်အလ္လာဟ်၏အချစ်မေတ္တာကြောင့်တရား လမ်းမှန်ရပြီး သူများဖြစ်ပါသည်။အေဗာဒသ်တွင်ကြိုးပမ်းပြီး လောကမမက်မောမှုပျော်မွေ့လေသည်။သဟ်ဂျွဒ်ကြောင့်၎င်း၏မျက်နှာသည်အ၀ါရောင်သန်းနေလေသည်။(ရှရီအီ)ငိုကြွေးတမ်းတမှုကြောင့်၎င်း၏မျက်စိများ၏အလင်းမမြင်ရမှုနည်းသွားလေ၏။မျက်လုံးများမှမျက်ရည်ကျနေသည်။မြတ်အလ္လာဟ်အားအလွန်တရာတမ်းတမှုကြောင့်၎င်း၏နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့နေသည်။ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကြောင့်ဝမ်းဗိုက်နှင့်ခါးတထပ်တည်းဖြစ်နေလေ၏။ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှု၎င်း၏မျက်နှာတွင်တွေ့ရလေသည်။ဖြူစင်သန့်စင်မှု၊သန့်ရှင်းမှုနှင့်ရှင်မြတ်အားကြောက်ရွံ့ ရိုသေ မှုတို့အား၎င်း၏မျက်နှာကိုကြည့် သိနိုင်လေသည်။အမှောင်ထုတိုင်း(မကောင်းမှုတိုင်း) အတွက်အလင်းပြဆီမီးခွက်ဖြစ်ပါသည်။အကယ်၍(ရှရီအီ)ပျော်ပွဲတစ်ခုခုတွင်၎င်းရှိမည်ဆိုလျှင်လည်းမည်သူမျှ၎င်းကိုမှတ်မိမည်မဟုတ်ပေ။အကယ်၍မရှိခဲ့လျှင်လည်းမည်သူမျှ၎င်း၏မရှိကြောင်းမသိရှိကြပေ။ဤသည်ကျွန်ုပ်၏သန့်စင်စင်ကြယ်သန့်ပြန့်သန့်ရှင်းသည့်ရှီအာပင်တည်း။ကျွန်ုပ်မြတ်နိုးချစ်ခင်ရသည့်ညီနောင်တော်ပင်တည်း။အိုကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားမည်မျှမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိလိုအပ်ပေသနည်း။
(၂)မောင်လာအလီ(အ.စ) အနေဖြင့်မိမိ၏ရှီအာသည်မြတ်အလ္လာဟ်နှင့်ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ဒီးန်အစ္စလာမ့်( မြတ်အလ္လာဟ်၏သာသနာတော်) နှင့်ပတ်သကပြီး တသွင်အာလင်မ်ပညာရှင်ဖြစ်ကြောင်းကစမ်စားထားလေသည်။ဤအတွက်ရှီအာအစစ်ရှီအာအမှန်စာရင်းဝင်ရန်အာလင်မ်အဆင့် ရောက်ရန်ကြိုး ပမ်းသင့်ပေသည်။ဤအတွက်ကြောင့်ဟုယူဆရပေသည်။မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)အနေဖြင့်ကိုယ်တိုင်အာလင်မ်ဖြစ်ရန်(သို့)ဆည်းပူးနေသူ(သို့) အာလင်မ်ကိုမြတ်နိုးသူဖြစ်ရန်မိန့်တော်မူထားသည့်အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်နေသည့်ဟဒီးစ်တော်အားလေ့လာနိုင်ပေသည်။
قالعلیع : شِيعتناالْمُتَبَاذِلُونَفِي‏ وَلَايَتِنَاالْمُتَحَابُّونَفِيمَوَدَّتِنَاالْمُتَزَاوِرُونَلِإِحْيَاءِأَمْرِنَاإِنْغَضِبُوالَمْيَظْلِمُواوَإِنْرَضُوالَمْيُسْرِفُوابَرَكَةٌلِمَنْجَاوَرُواوَسِلْمٌلِمَنْخَالَطُوا.
မောင်လာအေကာအေနာသ်ဟဇရတ်(သ) အလီ(အ.စ) မိန့်တော်မူလေ၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေလာယသ်လမ်းစဉ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှီအာသည်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးခွင့်လွတ်ပလပ်ခြင်းနှင့်ရက်ရောမှုဖြင့်ဆက်ဆံကြလေ၏။ကျွန်ုပ်တို့၏အချစ်မေတ္တာကြောင့်အချင်းချင်းအချစ်မေတ္တာထားကြလေသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အမိန့်တော်များကိုရှင်သန်ရန်အလိုငှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတွေ့ဆုံကြလေသည်။ဤသူများသည်အမျက်ဒေါသထွက်နေချိန်၌ လည်းမတရား၊ညှဉ်းပန်း၊နှိပ်စက်မှုကိုမပြုကြပေ။ပျော်ရွှင်ချိန်လည်း(ရှရီအီ) လည်းကိုမကျော်၊မဖောက်ကြချေ။မိမိတုို့၏အိမ်နီးချင်းများအတွက်မင်္ဂလာတရားကိုဖြစ်စေပါသည်။ပြီးနောက်မိမိတို့၏မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနှင့်ငြိမ်းချမ်းအေးဆေး ငြိမ်ဝပ် စွာနေကြလေသည်။
(၁)ရှီအာစစ်၊ရှီအာမှန်ဆိုလျှင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးခွင့် လွတ်ပလပ်ပြီး ရက်ရောသည်ဆိုကြောင်းဟဒီးစ်တော်မှမီးမောင်းထိုးပြထားရာရုံးရောက်၊ဂတ်ရောက်၊တရားရုံးရောက်ပြီးပြဿနာကိုမကြီးကြီးအောင်လုပ်ရန်၊ဖြေရှင်းရန်မလိုချေ။အကယ်၍ဆုံးမမရသည့်အခြေအနေ၊ညှိမရတော့သည့်အခြေအနေတွင်မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာမရ်ဂျာထံအကျိုးအကြောင်းပြောပြတင်ပြရန်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။ရက်ရောရာ၌လည်းကိုယ်လူသူလူဟုကျောသားရင်သားမကွဲခြားဘဲဆက်ဆံသင့်ပေးသည်။
(၂)ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) နှင့်အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ကိုအချစ်မေတ္တာထားလျှင်၎င်းတို့၏ရှီအာများကိုလည်းအချစ်မေတ္တာထားဖို့အရေးကြီးပေသည်။
(၃)ဟဒီးစ်တော်အရရစူလ်နှင့်အာလေရစူလ်၏အမိန့်တော်များကိုရှင်သန်ရန်အလိုငှတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတွေ့ဆုံကြသည်ဟုဆိုထားသဖြင့်အမိန့်တော်များကိုအမှန်တကယ်တင်ပြသည့်မဂျလစ်အစီအစဉ်၊ စာစောင်မဂ္ဂဇင်း၊စာအုပ်စသည်ကိစ္စရပ်များအတွက်နီးလျှင်အနီးကပ်တွေ့ ၍ဝေးလျှင်လည်းဖုန်း၊မေးလ်စသည်ဖြင့်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။
(၄)အမျက်ဒေါသထွက်ချိန်၌ရှီအာစစ်၊ရှီအာမှန်သည်မတရားမနှိပ်စက်၊မညှဉ်းပန်း၊သည်ကိုဟဒီးစ်တော်မှထောက်ပြထားရာမိမိတို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မကျေနပ်သည်နှင့်ဘာသာတူ၊ဖေရ်ကာတူအချင်းချင်းကိုမတရားပုတ်ခတ်စွပ်စွဲပြောဆိုသူများအထူးသတိပြုသင့်ပေသည်။ဤနေရာ၌မတော်တဆရှီအာအချင်းချင်းမပြေလည်မှု၊သဘောထားကွဲလွဲမှု၊ဖြစ်လာလျှင်တစ်ဖက်တည်း၏စကားကိုနားထောင်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးသူများ သတိကြီး သင့်ပေသည်။
(၅)ပျော်ရွှင်ချိန်၌လည်းတရားတော်မှခွင့်မပြုထားသည့်လုပ်ရပ်များကိုမကျူးလွန်ချေ။မိမိ၏အိမ်နီးချင်းအတွက်မင်္ဂလာတရားတော်ကိုဖြစ်ထွန်းစေ သည့်အတွက် ရှီအာအေမာမ်မီယာဖေရ်ကတ် ရှရီအီအိမ်နီးချင်း ဆိုသည်မှာမိမိနေအိမ်မှပတ်လည်အိမ်ခြေ(၄၀) အထိအကျုံးဝင်နေလေသည်။အိမ်နီးချင်းသည်မည်သည့်ဘာသာဝင်ပင်ဖြစ်နေပါစေ၊မိမိ ကြောင့် ပင်ပန်းဆင်းရဲသောက ဒုက္ခရောက်မှုကို မဖြစ်စေဖို့ ရှီအာစစ် ရှီအာမှန်ဖြစ်လိုသူတိုင်းသတိထားရပေမည်။
الامامالحسنع :فیجوابرَجُلٌقاللهإنیمِنْشِيعَتِكُمْفَقَالَالْحَسَنُبْنُعَلِيٍّيَاعَبْدَاللَّهِإِنْ‏ كُنْتَ‏ لَنَافِي‏ أَوَامِرِنَاوَزَوَاجِرِنَامُطِيعاًفَقَدْصَدَقْتَوَإِنْكُنْتَبِخِلَافِذَلِكَفَلَاتَزِدْفِيذُنُوبِكَبِدَعْوَاكَمَرْتَبَةًشَرِيفَةًلَسْتَمِنْأَهْلِهَالَاتَقُلْأَنَامِنْشِيعَتِكُمْوَلَكِنْقُلْأَنَامِنْمَوَالِيكُمْوَمُحِبِّيكُمْوَمُعَادِيأَعْدَائِكُمْوَأَنْتَفِيخَيْرٍوَإِلَىخَيْر.
တစ်ဦးတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မှအေမာမ်ဟစန်(အ.စ) ထံ ကျွန်တော် ဟာကိုယ်တော်၏ရှီအာဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်ထားရာအေမာမ် (အ.စ) အနေဖြင့်၎င်းအားအဖြေမိန့်တော်မူလေ၏။
အိုမြတ်အလ္လာဟ်၏အဖန်ဆင်းခံအသင့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဟ်ကာမ်(ခ) ဥပဒေသများကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးသူကျွန်ုပ်တို့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့်အရာများမှရှောင်ကြဉ်သူမှန်လျှင်အသင့်ပြောသည့်စကားမှန်ပေသည်။အကယ်၍အသင့်အနေဖြင့်ဤကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေမည်ဆိုလျှင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သည့်(ရာထူး-ရှီအာဖြစ်ကြောင်း) ကိုထွက်ဆိုကြေငြာခြင်းဖြစ်မိမိ၏အပြစ်ဂိုနာများတွင်ပိုများအောင်မလုပ်ပါလေနှင့်။အသင့်အနေဖြင့်ထိုနေရာရာထူး(ရှီအာ)နှင့်မထိုက်တန်ပေ။(ဤအတွက်ကြောင့်) ကျွန်တော်သည်ကိုယ်တော်၏ရှီအာဟုမပြောလေနှင့်။တစ်နည်းအားဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုလိုလားနှစ်သက်မြတ်နိုးသူကိုယ်တော်၏ရန်သူများ၏ရန်သူပါဆိုပါလေ။ဤသို့ပြောဆိုခြင်းဖြင့်အသင်သည်ကောင်းမြတ်ကောင်းမွန်သည့်လူကောင်းတစ်ယောက်မည်လေမည်။ကောင်းမှုသူစရိုက်ဖက်အားသန်စိတ်ဝင်စားသူမြည်လေမည်။
ညွှန်း - မီးဇာန်နိုလ်ဟေက်မအ်ကျမ်းအတွဲ( ၆ )
(၂)ရှီအာဟုစက္ကန့်အနည်းငယ်ပြောလိုက်ရုံဖြင့်မလုံလောက်သေးပဲ လက်တွေ့ သက်သေပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထင်ရှားနေလေသည်။
(၄) ရှီအာအကြောင်းအသေအချာမသိဘဲရှီအာဟာကာဖေရ်ပါ။မိုရ်ှရက်ပါ၊အစ္စလာမ်အနာကိုဆားသိပ်နေသူတွေပါ။ရဟူဒီများကိုအပြင်ပိုင်း၌ရန်သူ အဖြစ်ကြေငြာပြီး အတွင်းပိုင်းနှင့်ပေါင်းနေသူပါ။ဒီကောင်တွေကိုရှင်းသင့်တယ်။သာဝက (ရ.သွေ) တွေကိုစော်ကားတယ်၊ စသည်ဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြီး ရှီအာများနှင့်ဗိုင်ကောဒ်လုပ်ကြ၊သတ်ကြသည့်အစ္စလာမ်အတုအယောင်များအထူးသတိထားသင့်နေပေပြီး၊ဤကဲ့သို့ပြုကျင့်နေသည့်သူများ၏အပြစ်ဂိုနာသည်မသေးချေ။ကိုယ့်ခြေကိုပုဆိန်ဖြင့်ပေါက်နေသည့်လူ့ငနွားတိရစ္ဆာန်များပင်တည်း။ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) ထက်(မအာဇလ်လ္လာဟ်) တစ်လကြီးနေသူများပင်တည်း။ဤနေရာ၌မိမိအနေဖြင့်ရှီအာဖေရ်ကာ၌နေခွင့်ဖြစ်ခွင့်ရနေလျှက်စည်းစိမ်းတဏှာစသည်ကိုမက်ပြီးဘာသာခြားများနှင့်အိမ်ထောင်ပြုသူများ၊ဖေရ်ကာမတူသူများနှင့်အိမ်ထောင်ပြုသူများလည်းသတိပြုသင့်ပေသည်။ဆင်ခြင်သင့်ပေသည်။
قالعلیع : شِيعَتُنَاهُمُ‏ الْعَارِفُونَ‏ بِاللَّهِالْعَامِلُونَبِأَمْرِاللَّهِأَهْلُالْفَضَائِلِالنَّاطِقُونَبِالصَّوَابِمَأْكُولُهُمُالْقُوتُوَمَلْبَسُهُمُالِاقْتِصَادُوَمَشْيُهُمُالتَّوَاضُعُ ... تَحْسَبُهُمْمَرْضَىوَقَدْخُولِطُواوَمَاهُمْبِذَلِكَبَلْخَامَرَهُمْمِنْعَظَمَةِرَبِّهِمْوَشِدَّةِسُلْطَانِهِمَاطَاشَتْلَهُقُلُوبُهُمْوَذَهَلَتْمِنْهُعُقُولُهُمْفَإِذَااشْتَاقُوامِنْذَلِكَبَادَرُواإِلَىاللَّهِتَعَالَىبِالْأَعْمَالِالزَّكِيَّةِ- لَايَرْضَوْنَلَهُبِالْقَلِيلِوَلَايَسْتَكْثِرُونَلَهُالْجَزِيل‏.
ကျွန်ုပ်၏ရှီအာဆိုသည်မှာမြတ်အလ္လာဟ်မအ်ရေဖသ်( မြတ်အလ္လာဟ်အားအသေအချာ သိရှိ၊နားလည်၊သဘောပေါက်ခြင်း)ရှိလေသည်။မြတ်အလ္လာဟ်အမိန့်ဥပဒေသများကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးသူဖြစ်ပေသည်။ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူများဖြစ်လေသည်။၎င်းတို့၏အင်္ကျီသည်အလယ်အလတ်ဖြစ်လေသည်။ပြီးနောက်နေထိုင်မှုကျိုးနွံလေသည်။အသင်အနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုရောဂါဝေဒနာရှင်နှင့်အရှုးလိုထင်လေသည်။အမှန်တကယ်၎င်းတို့သည်ဤကဲ့သို့မဟုတ်ချေ။တနည်းဆိုရလျှင်မြတ်အလ္လာဟ်၏ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုနှင့်စွမ်းအင်များ၏အနိသင်သက်ရောက်မှုကြောင့်၎င်းတို့၏နှလုံးသားများသည်ရူးသွပ်သူပမာဖြစပြီး၎င်း၏အသိဥာဏ် ဦး နှောက်များသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ရှေ့တော်မှောက်၌အံ့သြမှုနှင့်အလုပ်မလုပ်တော့ချေ။မိမိတို့၏လိုလားတောင်းတမြတ်နိုးမှုကြောင့်၎င်းတို့သည်မနေထိုင်သည့်အခြေအနေဖြင့်ရှင်မြတ်ဖက်သိုပလှမ်းလေ၏။မြတ်အလ္လာဟ်အတွက်မိမိတို့၏အနည်းငယ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ်များကိုမကျေနပ်နိုပ်ပေ။ပြီးနောက်မြောက်များစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်သုစရိုက်များကိုလည်းအများကြီးဟုမထင်လေချေ။
(၄) ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်အနည်းငယ်လေးမရှိဆင်းရဲသားများကို ပေးကမ်းခြင်း၊ကူညီပေးခြင်း၊မုဆိုးမများကိုလှူဒါန်းခြင်း၊ခေတ်ပညာကျောင်းသား/သူများနှင့်သာသနာကျောင်းသား/သူများထောက်ပံ့ခြင်း၊စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးမကျေနပ်လက်ပိုက်မထိုင်သင့်ချေ။အများကြီးပြုပြီး လျှင်လည်းမြတ်အလ္လာဟ်သဘောတူလက်ခံဖို့ သာကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီး သောကထားရပေမည်။ကုသိုလ်တစိတ်ကိုတအိတ်၊တပဲကိုတကျပ်သားမထင်မိဖို့အထူးလိုအပ်ပေသည်။
قالالصّادقع : َيَاشِيعَةَآلِ‏ مُحَمَّدٍاعْلَمُواأَنَّهُلَيْسَمِنَّامَنْلَمْيَمْلِكْنَفْسَهُعِنْدَغَضَبِهِوَمَنْلَمْيُحْسِنْصُحْبَةَمَنْصَحِبَهُوَمُخَالَقَةَمَنْخَالَقَه‏.
အေမာမ်ဆွာဒစ် (အ.စ) မိန့်တော်မူလေသည်။
အိုအာလေ့မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) ၏ရှီအာအပေါင်းတို့အကြင်မည်သူမဆိုမိမိ၏ဒေါသ မောဟကိုမထိန်းချုပ်နိုင်မည်မိမိသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအပေါ်ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံခြင်းမိမိ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ အပေါ်ကောင်းမွန် စွာပြုမှု ဆက်ဆံခြင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြုသူများအတွက်ကောင်းမွန်စွာ ငြိမ်းချမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်းနှင့်မိမိ၏ဆန့်ကျင်ဖက်များကိုကောင်းမြတ်သည့်ဆန့်ကျင်မှုမပြုမခြင်းကျွန်ုပ်တို့မှမဟုတ်ချေ။
ညွှန်း - သိုအ်ဖိုလ်အိုကုလ်ကျမ်း
(၂) ရှီအာဆိုတာပြောရတာလွယ်သလောက်၊လက်တွေ့ ခက်ပါလားဟုထင်ရှားလာလေသည်။
(၃)ဟဒီးစ်တော်၌ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုသူများကိုကောင်းမွန်စွာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရမည်ဟုဖော်ပြထားရာအလကားနေရင်မနာလိုဝန်တိုမှုကြောင့်သူတစ်ပါးကိုရန်လိုသူ များ၊သူတစ်ပါးအကျိုးကိုဖျက်စီးနေ သူများမိမိ ကိုယ့်ကိုရှီအာဟုမပြောသင့်ချေ။အထူးအရှက်ယူသင့်ပေသည်။
الأمامالکاظمعقال : لَيْسَ‏ مِنْ‏ شِيعَتِنَامَنْخَلَاثُمَّلَمْيَرْعَقَلْبَهُ.
(၂) မနုဿလူသား၏အများစုသည်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းရှိချိန်တွင်မကောင်းသည့်အလုပ်များလုပ်လေ့ရှိပေသည်။ဘယ်သူမှမသိဘယ်သူမှမမြင်ဟူသည့်အတွေးမှားအမြင်မှားဖြစ် ဂိုနာများကို ပြုတတ်ကြလေသည်။ဤဟဒီးစ်တော်မှမည်မျှသင်ခန်းစာယူရန်မီးမောင်းထိုးပြနေကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။
قالالصّادقع : َلَيْسَ‏ مِنْ‏ شِيعَتِنَامَنْ‏ يَكُونُفِيمِصْرٍيَكُونُفِيهِمِائَةُأَلْفٍوَيَكُونُفِيالْمِصْرِأَوْرَعُمِنْهُ.
အကြင်မည်သူမဆိုထောင်ပေါင်းများစွာသောလူထုရှိသည့်မြို့ တွင်နေထိုင်ပြီးထို့ မြို့ သူ /သားများအတွင်းသီလသမာဓိအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှီအာ(များ) မှမဟုတ်ချေ။
(၁) ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟဒီးစ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေလေ၏။သီလသမာဓိအရှိဆုံးမှာရှီအာမဟုတ်ဘဲပြဿနာဂျကရာအများဆုံးလုပ်သူမှာရှီအာဖြစ်နေလေသည်။၀မ်းနည်းလေစွ ...
(၂) သီလသမာဓိသက္က၀ါတရားသည်ကျမ်းစာအုပ်များတွင်သာရှိ တော့ ပြီး အပြင်တွင်လက်တွေ့ရှားပါးနေသည့်အဖြစ်သို့ရောက်နေလေပြီး။
قالالصّادقع : قَوْمٌ‏ يَزْعُمُونَ‏ أَنِّيإِمَامُهُمْوَاللَّهِمَاأَنَالَهُمْبِإِمَامٍلَعَنَهُمُاللَّهُكُلَّمَاسَتَرْتُسِتْراًهَتَكُوهُأَقُولُكَذَاوَكَذَافَيَقُولُونَإِنَّمَايَعْنِيكَذَاوَكَذَاإِنَّمَاأَنَاإِمَامُمَنْأَطَاعَنِي.
တစ်ချို့ သည်ကျွန်ုပ်ဟာ၎င်းတို့၏အေမာမ်(အ.စ) ဟုထင်လေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ကစမ်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့၏အေမာမ်(အ.စ) မဟုတ်ချေ။မြတ်အလ္လာဟ်ဤသူများအပေါ်လအ်နသ်ချပေးတော်မူပါစေ။ကျွန်ုပ်သည်အရာတစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်လျှင်ဤသူများသည်××ဖြစ်ကြပေသည်။ကျွန်ုပ် အချို့ စကားပြောသည်အခါဤစကား၏အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုချက်ကဒီလိုဟုမိမိအထင်ဖြစ်ပြောဆိုတတ်ကြလေသည်။ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အမိန့်နာခံသူများအတွက်သာလျှင်အေမာမ်ဖြစ်တော်မူပေသည်။
ညွှန်း - ဘေဟာရွလ်အန်ဝါရ်ကျမ်းအတွဲ၂
(၁) ကျွန်တော်တို့ကအေမာမ်(အ.စ)အားမိမိတို့၏ အေမာမ် (အ.စ) ဟုဆိုယုံဖြစ်မလုံလောက်ချေ။အေမာမ်(အ.စ)ကိုင်တိုင်ကကျွန်တော်တို့၏အေမာမ်(အ.စ) ဖြစ်ကြောင်းကိုယ်တိုင်လက်ခံဖို့အရေးကြီးလိုအပ်ပေသည်။
(၂) အေမာမ်များ(အ.စ) ၏အမိန့်များကိုနားမထောင်လက် တွေ့မ ကျင့်သုံးသေးသမျှကာလပတ်လုံးရှီအာစစ် ၊ ရှီအာမှန်၊ မဖြစ်နိုင်ပေ။
(၃)ဟဒီးစ်တော်များ၏အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုချက်ကိုအသေအချာမသိဘဲရမ်းမတုတ်သင့်ပေ။ဘာသာရေးအသေအချာစိတ်ချရသည့်အစိတ်အပိုင်းအထိမသိရှိသေးဘဲမရေးသင့်မပြောသင့်မဆိုသင့်ချေ။အရည်အသွေးမီလာအောင်ကြိုးပမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင် သည် (( ဖွတ်၊ မိကျောင်း ဖြစ်၊ မြစ်မချမ်း သာ )) ကိန်း ဆိုက်ခဲ့၊ဆိုက်နေလေသည်။
အေမာမ် (အ.စ) အတွက်သိက္ခာမြင့်ပေသူဖြစ်ပါစေ
قالالصّادقع : یامَعَاشِرَالشِّيعَةِكُونُوالَنَازَيْناًوَلَاتَكُونُواعَلَيْنَاشَيْناًقُولُوالِلنَّاسِحُسْناًاحْفَظُواأَلْسِنَتَكُمْوَكُفُّوهَاعَنِالْفُضُولِوَقَبِيحِالْقَوْلِ.
ညွှန်း - အမာလီရှိက်ခ်စူဒူက်(ရ.ဟ)ကျမ်း
عنالمفضلقالالصادقع : إِنَّمَاشِيعَةُجَعْفَرٍمَنْعَفَّبَطْنُهُوَفَرْجُهُوَاشْتَدَّجِهَادُهُوَعَمِلَلِخَالِقِهِوَرَجَاثَوَابَهُوَخَافَعِقَابَهُفَإِذَارَأَيْتَأُولَئِكَفَأُولَئِكَشِيعَةُجَعْفَرٍ.
اصولکافیجلد2،خصالجلد 1 بابالخمسه
မိုဖွစေလ်ထံမှရီဝါယသ်တော်လာရှိလေသည်။အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) မိန့်တော်မူလေသည်။
ဧကန်မုချအေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ် (အ.စ) ၏ရှီအာ ဆိုသည်မှာ -ထိုသူသာလျှင်ဖြစ်ချေသည်။၎င်း၏၀မ်းဗိုက်နှင့်အရှက်အင်္ဂါသည်သန့်ရှင်းလေသည်။(ဆိုလိုသည်မှာဤအရာနှစ်ခုစလုံးကိုဟရမ်လုပ်ငန်းများမှထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပေသည်။အပြင်းအထန်(မိမိစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်) နှင့်ဂျေဟဒ်ပြုလေ၏။မိမိ၏အလုပ်များကိုမိမိ၏ဖန်ဆင်းရှင်မြတ်အလ္လာဟ်နှစ်မြို့မြတ်နိုးမှုအတွက်သာလျှင်ဆောင်ရွက်လေ၏။မြတ်အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်မည့်စ၀ါးဗ်ကိုမျှော်လင့်ပြီးအရှင်၏အကဗ်ကိုကြောက်ရွံ့လေ၏။အသင်အနေဖြင့်ဤကဲ့သို့သော်သူများတွေ့ရမည်ဆိုလျှင်(မှတ်ပါ)ထိုသူများသည်အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်(အ.စ)၏ရှီအာများပင်ဖြစ်ပေသည်။
(၃)မြတ်အလ္လာဟ် နှစ်မြို့ ကိုဦးစားပေးရမည်။တခြားအတွက်မဖြစ်စေရ။
(၆) ဤကဲ့သို့ အရည် အသွေးများ ထွက်ပေါ်လာရန် အမြဲ ကြိုးစားနေ သင့်ပေ သည်။
قالالصّادقع : كَذَبَ‏ مَنْ‏ زَعَمَ‏ أَنَّهُمِنْشِيعَتِنَاوَهُوَمُتَمَسِّكٌبِعُرْوَةِغَيْرِنَا.
အကြင်မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့(အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) မှအပအခြားသူများကိုမြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားမည်။ပြီးနောက်လည်းရှီအာဟုထင်နေမည်ဆိုလျှင်အမှန်တကယ်သည်လူလိမ် ၊လူညာ ၊မုသားဆိုသူပင်တည်း။
ညွှန်း - ဘေဟာ(ရ)ရွလ်အန်န၀ါရ်ကျမ်းအတွဲ၂
(၂)အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ)မှအပအခြားသူများကိုမြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ပြီးရှီအာဟုအော်နေသူများရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်တည်း။ ဟဒီးစ်တော်ဤ သို့လာခြင်းဖြစ်လေသည်။
عنابنأبینجرانقالسمعتاباالحسنعیقول : مَنْ‏ عَادَى‏ شِيعَتَنَافَقَدْعَادَانَاوَمَنْوَالاهُمْفَقَدْوَالانَالِأَنَّهُمْمِنَّاخُلِقُوامِنْطِينَتِنَامَنْأَحَبَّهُمْفَهُوَمِنَّاوَمَنْأَبْغَضَهُمْفَلَيْسَمِنَّا
(၂)ရှီအာများကိုသတ်ဖြတ်နှိပ်စက်ခြင်းသည်လည်းအမှန်တကယ်အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ကိုသတ်ဖြတ်နှိပ်စက်ခြင်းမည်လေ၏။
(၄)ရှီအာ၏အဆင့်အတန်းသည်မည်မျှမြင့်မားကြောင်း အထင်အရှားတွေ့ နိုင်ပေသည်။
قالالصّادقع : َشِيعَتُنَامَنْ‏ قَدَّمَ‏ مَااسْتَحْسَنَوَأَمْسَكَمَااسْتَقْبَحَوَأَظْهَرَالْجَمِيلَوَسَارَعَبِالْأَمْرِالْجَلِيلِرَغْبَةًإِلَىرَحْمَةِالْجَلِيلِفَذَاكَمِنَّاوَإِلَيْنَاوَمَعَنَاحَيْثُمَاكُنَّا.
(၃)အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ကိုသာလျှင်အဓိကထားပြီးဆင်းရဲရဲ၊ ချမ်းသာသာအေးအေးပူပူရှီအာဖြစ်နေဖို့လိုပေသည်။ငွေအသပြာကြောင့်မိန်းမကြောင့်၊ရာထူးဂုဏ်များကြောင့်ရှီအာမလုပ်သူမဖြစ်စေရ။ဤကဲ့သို့ပြုခဲ့လျှင်မတော်တဆကံကောင်းခဲ့လျှင်လည်းဤဘ၀၌ခရီးတာဖြစ်ပြီးနောက်အာခေရသ်တွင်စပါယ်ရှယ်ခံရမည်ဆိုတာမမေ့သင့်ချေ။
قالالباقرع : لَاتَذْهَبْبِكُمُالْمَذَاهِبُفَوَاللَّهِمَاشِيعَتُنَاإِلَّامَنْ‏ أَطَاعَ‏ اللَّهَ‏ عَزَّوَجَلَّ.
မှတ်ချက်။ ။ အထူးဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုမြတ်အလ္လာဟ်၏အမိန့်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အနည်းဆုံးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်စူရဟ်ဖွာသေဟာမှစူရဟ်နာစ်အထိအဓိပ္ပာယ်နှင့်ဘာသာပြန်သိဖို့လိုအပ်ပေသည်။ပြီးမှနောက်တဆင့်အကျယ်သဖ်စီးရ်။
သို့သော်မာရှာအလ္လာဟ်အီရန်နိုင်ငံတွင်မိမိတို့၏အချိန်၊စွမ်းအားအရပညာသင်ယူခဲ့သူများဆည်းပူးနေကြသူများယနေ့ဆိုလျှင်ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ဆို အပါအဝင်အယောက်၇၀ကျော်နေပြီးဖြစ်ပေသည်။သို့သော် အထူး ဝမ်းနည်းလေစွ ၊မြန်မာဘာသာပြန်စစ်မှန်သည့်အစ္စလာမ်ရှီအာအေမာမ်မီယာအမြင်အရပြန်ထားမှုမရှိချေ။
ယုတ်စွအဆုံးတော်တော်များများသည်ဆောင်းပါးရေးသားရာ၌လည်းမြန်မာဘာသာပြန်စွန္နီကုရ်အာန်ကိုသာဤ သည်မရွေး၊ ကူးချကော်ပီလုပ်ကြလေသည်။၀မ်းနည်းဖွယ်ဝမ်းနည်းဖွယ် ...
အို-မြတ်အလ္လာဟ်မြန်မာရှီအာများ၏ စစ်မှန်သည့်တိုးတက်ရေး၊အကျိုးပေးရေးကိစ္စများအတွက် နီယသ်မကောင်းသူများ၊ပြဿနာမီးလည်းတောက်စေပြီး ရှီအာ အသိုင်းအဝိုင်းကို လည်းလောင်းစေသည့်ကောက်ကျစ်သည့်စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်၊စိတ်ညံ့၊မနာလိုစိတ်ရှိသူများကိုယုတ်စွာအဆုံး(ခိုဒါနာခွါစ်သာ ) ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးဇူးရှင်အဖေနှင့်အမေများ ၊ဆွေမျိုး များအကြီးအကဲများ၊မောင်လာနာများ၊ဇကေရဟ်များ ...ဖြစ်နေလျှင်ပထမဆင့်အနေဖြင့်ဟေဒါယသ်(တရားလမ်းမှန်)ညွန်ပြတော်မူပြီး၊သောင်(၀်)ဗာ(၀န်ချတောင်းပန်) နိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူပါ။
မပြောကောင်းမဆိုကောင်းဤကဲ့သို့မှမဟုတ်၊မရလျှင်လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုခံပြီးမြန်မာရှီအာများနယ်ပယ်မှဖယ်ရှားပေးသနားတော်မူပါ။၎င်းတို့အားကာယ၊ဉာန၊ဒါနဖြင့်ကူညီထောက်ပံ့သူများကိုလည်းရှင်မြတ် အလွတ်မပေးတော်မူပါနှင့်ဟု အသနားခံ ဒိုအာ ပြုလိုက်ပါသည်။ အာမီးန် ...
قتاالباقرع : فیصفةالشیعة : َإِنَّهُمْ‏ حُصُونٌ‏ حَصِينَةٌفي [وَ] صُدُورٌأَمِينَةٌوَأَحْلَامٌرَزِينَةٌلَيْسُوابِالْمَذَايِيعِالْبُذُرِوَلَابِالْجُفَاةِالْمُرَاءِينَرُهْبَانٌبِاللَّيْلِأُسْدٌبِالنَّهَارِ.
ဤ(ရှီအာ)သည်ခိုင်မာတည်တံ့သည်ခံတပ်ဖြစ်လေသည်။၎င်းတို့၏နှလုံးသားသည်အလွဲသုံးစားမလုပ်သည့်(နှလုံးရှင်များ) ဖြစ်လေသည်။(သူတစ်ပါး၏လျှို့ ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းသူဖြစ်ပေသည်။)၎င်း၏အတွေးအခေါ်သည်မှန်ကန်ပြီးဖြစ်ပေသည်။သူများနောက်လိုက်သူ ၊ ပြဿနာရှာသူ၊သစ္စာဖောက်၊နှိပ်စက်သူ၊ပြစားသူမဟုတ်ချေ။ဤရှီအာများသည်ညများကိုအေဗာဒသ်တွင်ပျော်မွေ့ ကြပြီး၎င်း၌ရဲရင့်ပြတ်သားလေသည်။
ညွန်း - မစ်ရ်ှကသွလ် အန်နဝါ(ရ) ကျမ်း
(၂) သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာစသည်၌အလွဲသုံးစားလုပ်သူများ၊အဆင်ပြေ ၊ တည်နေလျှင်၎င်း၏လျှို့ ဝှက်ချက်များကိုဝှက်ထားပြီးအဆင်မပြေတော့လျှင်လူအများသိအောင်မောင်းထုသူများမိမိကိုယ်ကိုရှီအာဟုကြေညာနေသူများ အထူးသိပြုသင့်ပေသည်။ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များ သည် ရေမရှိသည့်ချောင်းနှာခေါင်းပေါ်ကာအရှက်ကြီးကြီး နှင့် သေသင့်ပေသည်။
(၃) ပြဿနာရှာသူဆိုသည်မှာမြတ်အလ္လာဟ်၊ရစူလ်(ဆွ)၊အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ)) ၏အမြင်၌ဖြစ်ဖို့ အထူးအရေးကြီး လိုပေသည်။ကျွန်တော်တို့၏မြန်မာရှီအာလောကရှိ တစ်ချို့ မနူးမနပ် များ၏ လုပ်ထုံး ၊ ပြောထုံး အရ တစ်ဦးတစ်ယောက်သို့အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုခု ၏အမှားကိုထောက်ပြမည်၊လိမ်လည်ပြစားမှုတွေဖော်ထုတ်မည်၊သူတို့ကြောင့်မိမိတို့ ၏(အကြံအဖန်) ဈေးဆိုင်များ ပိတ်ရ မည်။လူကြီးသူကြီးတွေသက်ဆိုင်ရာတွေစစ်လာမေးလာမည်စသည်ဖြင့်မိမိတို့၏မကောင်းသည့်နည်းများဖြင့်အကျိုးအမြတ်ထုတ်ယူနေမှုကိုဟန့်တားလာသူများဟန့်တားအောင်လုပ်သူများ ကိုပြဿနာကောင်၊ငဖွစသည်ဖြင့်အပြောခံရသူများ ကိုမဆိုလိုချေ။
(၅)ညများ၌အေဗာဒသ်ပြုသူ၊နေ့၌ရဲရင့်ပြတ်သားသူဟုဆိုထားရာ ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ရှီအာ အေမာမ် မီယာဟု ခံယူထားသည့် အတွက် ညညဆိုနေရာစုံ တွင် ထိုင်ပြီးဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဟိုလူ့အတင်း၊ဒီလူ့အဖျင်းတုပ်သူများ၊တရားတော်မှခွင့်မပြုထားသည့်ဗီဒီယိုများကြည့်သူများမဖြစ်စေဖို့ သတိပြုသင့်ပေသည်။နေ့လည်ဆိုလည်းရဲရင့်ပြတ်သားရမည်ဆိုသည့်အချက်များမှာဟလာလ်အလုပ်၊သမာအာဇီဝအလုပ်အတွက်ထင်ထင်ရှားရှားလုပ်ရဲမှုတစ်ခုသည်လည်းမပါဝင်ဟုမဆိုနိုင်ချေ။
ကျွန်တော်မျိုးတို့အားလုံး ကို ဤ မကောင်းသည့် အချင်းအရည်ပုတ် များ မှ ကင်းအောင်နေနိုင် စွမ်းပေးသနားတော်မူပါ။ မြတ်အလ္လာဟ် ... အာမီးန်
قالالامامالکاظمعاموسیبنبکرالواسطی : لَوْمَيَّزْتُشِيعَتِيلَمْأَجِدْهُمْإِلَّاوَاصِفَةًوَلَوِامْتَحَنْتُهُمْلَمَاوَجَدْتُهُمْإِلَّامُرْتَدِّينَوَلَوْمَحَّصْتُهُمْلَمَاخَلَصَمِنَالْأَلْفِوَاحِدٌوَلَوْغَرْبَلْتُهُمْغَرْبَلَةًلَمْيَبْقَمِنْهُمْإِلَّامَاكَانَلِيإِنَّهُمْطَالَمَااتَّكَئُواعَلَىالْأَرَائِكِفَقَالُوانَحْنُشِيعَةُعَلِيٍّإِنَّمَاشِيعَةُعَلِيٍّمَنْصَدَّقَ‏ قَوْلَهُ‏ فِعْلُه‏
အေမာမ်မူစာယေကာဇင်မ် (အ.စ) အနေဖြင့်မူစာဗင်ဘက်ရ်ရေလ်ဝါစ်သွာအားမိန့်တော်မူလေသည်။
အကယ်၍ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်မိမိ၏ရှီအာများကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုသူများကိုသာလျှင်တွေ့ရပေမည်။ပြီးနောက်၎င်း တို့ ကိုစမ်းသပ်မည်ဆိုလျှင်လည်းအားလုံးမျက်နှာလွှဲသွားကြပေမည်။ထိုပြင်၎င်းတို့ကို စိစစ်တိုင်းတာမည်ဆိုလျှင်ထောင်ပေါင်းများစွာမှတစ်ယောက်မျှသီးသန့်အစစ်အမှန်ရှီအာထွက်လာမည်မဟုတ်ချေ။၎င်းနောက်၎င်းကိုရှာဖွေစိစစ်စစ်ထုတ်မည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်နှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူများမှအပမည်သူမျှလွတ်မြောက်မည်မဟုတ်ချေ။ကာလာတစ်ခုကတည်းက(အချိန်ကြာမြင့်စွာ)နေရာယူအမှီ×××ကျွန်ုပ်တို့သည်အလီ(အ.စ)၏ရှီအာဖြစ်သည်ဟုသာလျှင်ဆိုကြလေသည်။
၂။လောကဓံ၏ဒဏ်မခံနိုင်သူများ၊စမ်းသပ်မှုမခံနိုင်သူများအစစ်ဆေးမခံနိုင်သူများသည်ရှီအာစစ်ရှီအာမှန်မဖြစ်နိုင်ချေ။ယေဘူယျအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၌အချို့အစွန်းရောက်များဖက်မှဒါရှီအာတွေသူတို့နှင့်သားပေးသမီးပေးမလုပ်နဲ့ဈေးမ၀ယ်နဲ့သူတို့ဆိုင်က၀ယ်မဲ့အစားကာဖေရ်ဆိုင်က၀ယ်ရှီအာဆိုတာကာဖေရ်အစ္စလာမ်ကိုဒုက္ခပေးတာနာမည်ဖျက်တာ၊သာဝကတော်များ(ရသွေ့) တွေကို ဆဲတာ၊စသည်ဖြင့်ပြောဆိုထိုးနှက်နေမှုများကိုလည်းစမ်းသပ်နေမှုတစ်ခု ဟုသတ်မှတ်နိုင်ပေသည်။
၃။ထောင်ပ်ေင်းများ စွာမှ ရှီအာတစ်ဦးတစ်ယောက်ခန့်ရှီအာစစ်ရှီအာမှန် ရှိဖို့မလွယ်ဟုဟဒီးစ်တော်ကဆိုထားရာအရည်အတွက်ထက်အရည်အသွေးအရည်အချင်းကသာနေကြောင်းဦးစားပေးထားကြောင်းသိနိုင်ပေသည်။နေရာတကာ အဖွဲ့ အားကိုး၊လူဦးရေအားကိုးနေသည့်မိမိကိုယ်ကိုရှီအာဟုဆိုနေသူများအထူးသတိပြုသင့်ပေသည်။
قالالامامالرضاع : ُشِيعَتُنَا- الَّذِينَيُقِيمُونَالصَّلاةَوَيُؤْتُونَالزَّكاةَوَيَحُجُّونَالْبَيْتَالْحَرَامَوَيَصُومُونَشَهْرَرَمَضَانَوَيُوَالُونَأَهْلَالْبَيْتِوَيَبْرَءُونَمِنْأَعْدَائِنَاأُولَئِكَأَهْلُالْإِيمَانِوَالتُّقَىوَأَهْلُالْوَرَعِوَالتَّقْوَىمَنْرَدَّعَلَيْهِمْفَقَدْرَدَّعَلَىاللَّهِوَمَنْطَعَنَعَلَيْهِمْفَقَدْطَعَنَعَلَىاللَّهِلِأَنَّهُمْعِبَادُاللَّهِحَقّاًوَأَوْلِيَاؤُهُ‏ صِدْقا
قالالصّادقع : َإِنَّمَاشِيعَتُنَاأَصْحَابُ‏ الْأَرْبَعَةِالْأَعْيُنِعَيْنَانِفِيالرَّأْسِوَعَيْنَانِفِيالْقَلْبِأَلَاوَالْخَلَائِقُكُلُّهُمْكَذَلِكَإِلَّاأَنَّاللَّهَعَزَّوَجَلَّفَتَحَأَبْصَارَكُمْ‏ وَأَعْمى‏ أَبْصارَهُمْ‏.
ကျွန်ုပ်တို့ရှီအာများ၏မျက်လုံးလေးလုံးရှိလေ၏။နှစ်လုံးမှာမျက်နှာပေါ်၌ရှိပြီးခေါင်းပေါ်၌ရှိပြီး၊ကျန်နှစ်လုံးမှာနှလုံးသား၌ဖြစ်ပေသည်။အသိ ၊သတိရှိပါလေ။ရှိသမျှအဖန်ဆင်းခံများသည်ဤအတိုင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။သို့သော်မြတ်အလ္လာဟ်အနေဖြင့်အသင်တို့(ရှီအာအေမာမ်မီယာများ) ၏နှလုံးသားမျက်လုံးများကိုဖွင့်ပေးထားတော်မူပြီး၎င်းတို့၏နှလုံးသားရှိမျက်လုံးများကိုပိတ်ထားတော်မူလေ၏။
(၂)မြတ်အလ္လာဟ်အနေဖြင့်နှလုံးသားရှိမျက်လုံးနှစ်လုံးအားဖွင့်ပေးစေလိုသည့်ဆန္ဒရှိလျှင်မိမိကိုယ်ကိုရှီအာစစ်ရှီအာမှန်ဖြစ်လာအောင်မြတ်အလ္လာဟ်ရစူလ်(ဆွ) နှင့်အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) တို့၏အမြင်၌ရှီအာဖြစ်လာဖို့အထူးကြိုးပမ်းအားထုတ်ရပေမည်။
قالالصّادقع : قَالَلِيأَبُوعَبْدِاللَّهِجَعْفَرُبْنُمُحَمَّدٍعيَاعَبْدَالْأَعْلَى ... فَأَقْرِئْهُمُالسَّلَامَوَرَحْمَةَاللَّهِ .. يَعْنِيالشِّيعَةَ .. وَقُلْقَالَلَكُمْرَحِمَاللَّهُعَبْداًاسْتَجَرَّمَوَدَّةَالنَّاسِإِلَىنَفْسِهِوَإِلَيْنَابِأَنْيُظْهِرَلَهُمْمَايَعْرِفُونَوَيَكُفَّعَنْهُمْ‏ مَايُنْكِرُونَ‏.
အိုအဗ်ဒိုလ်အအ်လာကျွန်ုပ်ဘက်မှ၎င်းတိုို့ဆိုလိုသည်မှာရှီအာများအပေါ်စလာမ်နှင့်မြတ်အလ္လာဟ်၏ရဟ်မသ်တော်ပို့သပါလေ။ပြီးနောက်ပြောကြားပါလေ။အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်(အ.စ) မှအသင်တို့အားမိန့်ကြားလိုက်ပါသည်။မြတ်အလ္လာဟ်၏ရဟ်မသ်တော်ကျရောက်ပါစေ။မည်သို့သော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ကျရောက်မည်ဆိုလျှင်ထိုကျေးကျွန်သည်လူထုနားလည်သည့်စကားကိုပြောဆိုပြီးနားမလည်သည့်စကားများမှရှောင်ကြဉ်သူဖြစ်လေသည်။လူထုအားမိမိဖက်(ရှီအာစစ်၊ရှီအာမှန်) ဖြစ်ဖို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ဖက်သို့ဖိတ်ခေါ်လေသည်။
၁။မြတ်အေမာမ် (အ.စ) အနေဖြင့်ရဟ်မသ်တော်ရရှိရန်နည်းလမ်းကိုညွှန်ပြတော်မူထားလေသည်။
၂။ရှီအာစစ်၊ရှီအာမှန်ဖြစ်ဖို့သာတိုက်တွန်းပြီးအဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ဖက်သာလာဖို့တိုက်တွန်းဖို့သာညွှန်းပြထားရာမိမိကိုယ်ကိုရှီအာဟုဆိုပြီးသူလူကိုယ်လူသူဗလီငါ့ဗလီသူအေမာမ်ဘာရာငါ့အေမာမ်ဘာရာလုပ်နေသူများအထူးအရှက် ရှိ ပြီးနောင်တကြီးစွာဖြင့်သောင်ဗာပြုသင့်ပေသည်။
قالالامامالرضاع : شِيعَتُنَايَنْظُرُونَ‏ بِنُورِاللَّهِ‏ وَيَتَقَلَّبُونَفِيرَحْمَةِاللَّهِوَيَفُوزُونَبِكَرَامَةِاللَّهِمَامِنْأَحَدٍمِنْشِيعَتِنَايَمْرَضُإِلَّامَرِضْنَالِمَرَضِهِوَلَااغْتَمَّإِلَّااغْتَمَمْنَالِغَمِّهِوَلَايَفْرَحُإِلَّافَرِحْنَالِفَرَحِهِوَلَايَغِيبُعَنَّاأَحَدٌمِنْشِيعَتِنَاأَيْنَكَانَفِيشَرْقِالْأَرْضِأَوْغَرْبِهَاوَمَنْتَرَكَمِنْشِيعَتِنَادَيْناًفَهُوَعَلَيْنَاوَمَنْتَرَكَمِنْهُمْمَالًافَهُوَلِوَرَثَتِه‏
၃။ဤလောက၌ရှီအာလောက်အဆင့်အတန်းမြင့်မားသူမည်သူမျှမရှိချေ။သို့သော်ရှီအာဖြစ်ကြောင်းမြတ်အလ္လာဟ်လက်ခံတော်မူပြီးရစူလ်(ဆွ) နှင့်အာလေရစူလ်(အ.စ) ထောက်ခံဖို့သာလိုအပ်ပေသည်။
၄။အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ၏မေတ္တာ၊စေတနာ၊သဒ္ဓါကိုအထင်အရှားသိနိုင်ပေသည်။နေရာတကာအဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) အစားသာဝကသာဝက၊ဆွာဟာဗာဆွဟာဗာပြုနေသူများဤကဲ့သို့ဆွာဟာဗာတစ်ပါးပါးမှဟောထားမိန့်ထားသည့်ဟဒီးစ်တော်အစစ်အမှန်ကိုပြနိုင်ပါသလား၊သက်သေထူနိုင်ပါသလား၊အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) နှင့်ပတ်သက်ပြီးဟဒီးစ်စစ်ဟဒီးစ်မှန်များထုနှင်ထည်ပြနိုင်ပေသည်။ဤနေရာ၌ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်သာဝကတော်များဆွာဟဗာတော်များကိုမလေးစား၊မရိုသေ၊မချစ်၍မဟုတ်ချေ။သူနေရာနှင့်သူထားဖို့ဆိုလိုခြင်းစေတနာမှန်သာဖြစ်ပေသည်။
قالرسولاللهص : َيَاعَلِيُّ ... هَذَاحَبِيبِي‏ جَبْرَئِيلُيُخْبِرُنِيعَنِاللَّهِجَلَّجَلَالُهُأَنَّهُقَدْأَعْطَىمُحِبِّيكَوَشِيعَتَكَسَبْعَخِصَالٍالرِّفْقَعِنْدَالْمَوْتِوَالْأُنْسَعِنْدَالْوَحْشَةِوَالنُّورَعِنْدَالظُّلْمَةِوَالْأَمْنَعِنْدَالْفَزَعِوَالْقِسْطَعِنْدَالْمِيزَانِوَالْجَوَازَعَلَىالصِّرَاطِوَدُخُولَالْجَنَّةِقَبْلَسَائِرِالنَّاسِمِنَالْأُمَمِبِثَمَانِينَعَاماً.
အိုအလီ(အ.စ) .... သူဟာကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဂျီဗရာအီးလ်(အ.စ) ဖြစ်ပါသည်။၎င်းအနေဖြင့်အလ္လာဟ်ဖက်တော်မှဤသတင်းကိုယူဆောင်လာချေသည်။ထိုသတင်းသည်ကားမြတ်အလ္လာဟ်အနေဖြင့်အသင်အားအချစ်မေတ္တာထားသူများနှင့်အသင်၏ရှီအာများကိုဂုဏ်ဝိသေသန(၇)မျိုးချီးမြှင့်တော်မူလေသည်။ (ဂုဏ်ဝိသေသန(၇)မျိုးမှာ)
ညွှန်း - ဘေဟာ(ရ) ရွလ်အန်န၀ါရ်ကျမ်းအတွဲ၆၈
قالالصّادقع : ٍلَوْأَنَ‏ شِيعَتَنَااسْتَقَامُوالَصَافَحَتْهُمُالْمَلَائِكَةُوَلَأَظَلَّهُمُالْغَمَامُوَلَأَشْرَقُوانَهَاراًوَلَأَكَلُوامِنْفَوْقِهِمْوَمِنْتَحْتِأَرْجُلِهِمْ‏ وَلَمَاسَأَلُوااللَّهَشَيْئاًإِلَّاأَعْطَاهُم‏
قالالامامعلیع : شَكَوْتُ‏ إِلَى‏ رَسُولِ‏ اللَّهِ‏ صحَسَدَالنَّاسِإِيَّايَفَقَالَيَاعَلِيُّإِنَّأَوَّلَأَرْبَعَةٍيَدْخُلُونَالْجَنَّةَأَنَاوَأَنْتَوَالْحَسَنُوَالْحُسَيْنُوَذُرِّيَّتُنَاخَلْفَظُهُورِنَاوَأَحِبَّاؤُنَاخَلْفَذُرِّيَّتِنَاوَأَشْيَاعُنَاعَنْأَيْمَانِنَاوَشَمَائِلِنَا.
ကျွန်တော်အနေဖြင့်လူတွေဟာအလွန်ပင်ကျွန်တော်အားမနာလိုဝန်တိုကြပါသည်ဟုတမန်တော်မြတ်ကြီးထံတိုင်လေ၏။မြတ်တမန်တော်မိန့်တော်မူလေ၏။အိုအလီ (အ.စ) ဂျန္နတ်အမတသုခဘုံ၌အရင် ဆုံးစ့မြန်းရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးဖြစ်ပေသည်။ထိုလေးဦးမှာအသင်၊ကျွန်ုပ်၊ဟစန် (အ.စ) နှင့်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဖြစ်လေ၏။ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဝယ်ကျွန်ုပ်၏အနွယ်တော်မွန်များ(အ.စ) ဆွေမျိုးများဖြစ်မည်။၎င်းတို့၏နောက်ဝယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအချစ်မေတ္တာထားသူများဖြစ်မည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ရှီအာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘယ်ညာ၌ရှိပေမည်။
၃။ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)နှင့်အဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) အပေါ်အချစ်မေတ္တာထားသည့်မိုဂစ်ဗ်များနှင့်ရှီအာတို့၏အဆင့်အတန်း၊နေရာကိုသိသာစွာထင်ရှားစွာမြင်နိုင်သိနိုင်ပေသည်။ထာဝရအနှိုင်းမဲ့အတုမရှိတစ်ဆူတည်းသောမြတ်အလ္လာဟ်ဤဘာသာပြန်အားကျွန်တော့်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲရှိအရာများအားလုံးအတွက်နှစ်မြို့ သဘော တူ လက်ခံတော်မူပါစေ။မနာလိုသူ၊မကောင်းကြံနေသူအားလုံး၏ အန္တရာယ်အသွယ်သွယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူပါ။